I-Youtube TV vs Hulu Live (2020) - Yikuphi okuyisevisi ehamba phambili? - Ezokuzijabulisa
I-YouTube TV neHulu Live yizindlela ezimbili ezithandwa kakhulu kwikhebula. Yomibili le misebenzi ye-TV yethulwe ngo-2017 futhi ineqoqo elimangazayo leziteshi zasendaweni.I-Youtube Tv neHulu Live zombili zingamapulatifomu okusakaza ividiyo ngezinjongo zokuzijabulisa.
I-YouTube TV neHulu Live zineqoqo lemibukiso yoqobo nohlu lwesiteshi oluyingqayizivele.Ukukhethwa kwezemidlalo kwe-YouTube TV kungcono kuneHulu Live, kepha iHulu Live TV inokukhetha okuhle kweziteshi neziteshi zokuzijabulisa.
Uma kukhulunywa ngokuqukethwe koqobo, i-YouTube TV inamaqoqo athe xaxa kunoHulu. Kodwa-ke, iHulu Live inezinhlobonhlobo zokuqukethwe kwekhwalithi. Akekho owinile ocacile lapha, udinga ukukhetha ngokuya ngohlobo lokuqukethwe oluthandayo.
Ngakho-ke, ingabe iHulu Live noma i-YouTube TV iyona engcono kuwe?Kokubili kuyefana ngaphandle kwentengo kanye nokubalwa kwesiteshi, kodwa siqinisekile ukuthi uzofunda lapha umehluko oqondile nokuthi iyiphi insiza yokusakaza bukhoma ye-TV efanelekile kuwe.
Kokubili i-YouTube TV ne-Hulu Live, uthola lokho okukhokhelayo.Womabili la mapulatifomu aphakathi kokuphila okuhle kakhulu amapulatifomu okusakaza iyatholakala namuhla futhi bobabili banconywa kakhulu. Zombili zisebenza njengenye i-cable TV futhi kufanelekile ukubhekelela abasiki bezintambo bakamuva.
I-6 Best VPN yeNetflix
Indwayimane TV vs YouTube TV
I-Youtube TV vs Hulu Live - Ukuqhathanisa okuningiliziwe
I-YouTube TV neHulu Live zinomehluko omkhulu uma kukhulunywa ngeziteshi. I-YouTube TV inikeza abasebenzisi iziteshi ezingama-67 kuziteshi eziyi-100 eziphezulu kuyo yonke insizakalo, kanti iHulu inikeza iziteshi ezingama-58 kuphela.Noma kunjalo, womabili amapulatifomu abelana ngeziteshi ezidumile ezibandakanya iCartoon Network, iDisney Channel, i-ESPN, iFox News, i-TBS, i-USA Network, nokuningi.
Isixhumi esibonakalayo se-YouTube TV silula. Unamathebhu weKhaya, weLabhulali, ne-Live TV, azokuvumela futhi ukuthi uhlele imibukiso ebukhoma futhi urekhode okuqukethwe, noma ubuke okuthile osukurekhodile ku-DVR.
Ungasebenzisa futhi umsebenzi wokusesha kunoma iyiphi ithebhu, ukuze ukwazi ukuthola okufunayo.Umsebenzi we-DVR ukuvumela ukuthi urekhode i-TV engenamkhawulo, kepha ungagcina kuphela ukurekhoda kwakho izinyanga ezingaba yisishiyagalolunye.
Isibonisi se-Hulu Live TV sinokubuka okususelwa kugridi. Ungapheqa imibukiso ekhona ekhona ku-Hulu noma ubheke kuma-movie nemibukiso osuyirekhodile.Inokubukwa kwewindi elikhulu okwenza kube lula ukuthola lokho ofuna ukukubuka ngaphandle kokuhlela amakhasi wokuqukethwe.
I-Youtube Tv Vs Hulu Live - Amadivayisi Asekelwayo
Ngenkathi i-YouTube iqala, yayisekelwa kumadivayisi ambalwa kuphela. Nokho, lokho kwashintsha ngokushesha okukhulu.Manje isiyatholakala ngamabhokisi eRoku, i-Apple Tv, I-Google Chromecast , Izicishamlilo kanye nama-TV, amadivayisi we-Android nama-TV asebenzisa i-Android TV, i-Xbox One, amadivayisi we-iOS, ama-Apple TV nge-AirPlay, nama-smart TV avela ku-LG naku-Samsung.
IHulu Live TV iyatholakala kumadivayisi we-Android, i-Apple TV, i-LG Smart TVs, ama-Mac, ama-Amazon Fire TV, kanye ne- Izinduku ze-Fire TV , Ama-PC, i-Rokus, i-Chromecast, amadivayisi we-iOS, ne-Xbox One.UHulu futhi uwukuphela komhlinzeki wesevisi otholakala kwi-Nintendo Switch console ephathekayo.
I-YouTube TV vs Hulu Live - Intengo
Ngokuqondene nentengo, i-YouTube TV inyuse intengo yayo yafika ku- $ 65 / ngenyanga. Ngakho-ke, iHulu + Live, ebiza cishe u- $ 55 / ngenyanga ithola inzuzo lapha njengoba ishibhile kune-YouTube Live.Uma ufuna isephulelo noma uhlelo lonyaka, bobabili abanayo i- isaphulelo sipho noma uhlelo lonyaka, ngakho-ke iHulu Live ne-YouTube TV ziyalingana uma kukhulunywa ngokonga.
Kokubili iHulu ne-YouTube TV kunikeza isikhathi sesivivinyo samahhala sezinsuku eziyisikhombisa.I-Hulu + Live TV ifaka phakathi isikhangiso esiyisisekelo, esingasuswa ngokukhokha enye imali engu- $ 6 / ngenyanga.
Futhi, ukwenza uhlelo lwakho ngendlela oyifisayo nge-DVR ethuthukisiwe nezikrini ezingenamkhawulo, uhlelo lwe-Hulu Live lungathatha enye i- $ 15 / ngenyanga ngaphezulu kwalokho.
I-Youtube Tv Vs Hulu Live - Izici
I-YouTube TV ibiza cishe u- $ 64.99 ngenyanga kanti i-Hulu Live ibiza cishe u- $ 54.99 ngenyanga (ngezikhangiso) futhi uma ufuna ngaphandle kwezikhangiso, izokubiza cishe u- $ 60.99 ngenyanga.
I-YouTube TV inesikhathi sokuzama samahhala sezinsuku eziyi-14. IHulu Live inesikhathi sesivivinyo sezinsuku eziyi-7 noma ngaphandle kwezikhangiso.
I-YouTube TV ineziteshi eziseduze ezingama-85 + kanti iHulu Live ineziteshi ezingama-65 +.
Izitolo ze-Cloud DVR ku-YouTube TV azinamkhawulo okusebenza okuhle futhi. Kepha, ku-Hulu Live kungamahora angama-50 ngentengo ka- $ 55. Ungathuthukisa umthamo weSitoreji se-DVR ngokukhokha isamba esingeziwe se- $ 10.
Kunemifudlana ecishe ibe ngu-3 ngasikhathi sinye ku-YouTube TV. Kepha, ku-Hulu Live bangu-2 kuphela. Ungakhokha uHulu cishe ngama- $ 10 ngenyanga futhi izophinda ithuthukise inani lemifudlana yakho ibe yimingcele.
Inketho yokubuka ungaxhunyiwe ku-inthanethi ayitholakali ku-YouTube TV kanti itholakala ku-Hulu Live ngaphandle kwezikhangiso.
I-YouTube TV neHulu Live zombili zinezikhangiso. Kepha, ku-Hulu Live, uma ukhokha imali ethe xaxa ungasusa izikhangiso. Kodwa-ke, awukwazi ukuyisusa ku-YouTube TV. Ungeqa isikhangiso noma kunjalo.
I-Hulu Live inezici eziningi ezenziwe ngezifiso futhi zihluke kancane kulezo ze-YouTube TV.
Ungasetha amaphrofayli wabasebenzisi abahlukahlukene futhi usethe amasethingi wakho wokukhetha i-Taste Picker bese ugcine okuqukethwe endaweni ye-My Stuff. Abasebenzisi bayo bangathanda futhi bangathandi imibukiso nama-movie asiza iHulu Live ukufanisa okuthandayo. Uma unganelisekile ngalokho okuvezwa yiHulu, ungakhetha ukuyeka ukuthola iziphakamiso kumhlinzeki wesevisi.
Ukuhlangana namamenyu kuzingxenyekazi zombili kwehlukile komunye nomunye nakukhebuli ejwayelekile.
I-YouTube ivumela amakhasimende ayo ukuthi aphathe umhlahlandlela wawo noma ngabe akhetha kanjani - ngama-alfabhethi noma ngokuhlanganiswa ngohlobo (ezemidlalo, izindaba noma ama-movie, njll.) Ngakolunye uhlangothi, iHulu inethebhu Yeziteshi Zami lapho ungagcina khona izintandokazi zakho.
Umhlahlandlela we-YouTube kulula ukuwaphatha kanti umhlahlandlela kaHulu unzima kancane.
Isici esisodwa esimangazayo abahlinzeki bezinsizakalo abanikezayo yikhono lokusesha amaqembu ezemidlalo owathandayo bese uwafaka kokuqoshiwe kwe-DVR okuzokusiza ukuthi ube nemidlalo yakamuva kulayini wakho phezulu.
Uma empeleni ufuna ukusika intambo kukhebula futhi uncike kusiteji sokusakaza esisekelwe ku-inthanethi se-TV yakho ebukhoma, ngokuqinisekile uzothola okudingayo nge-YouTube TV noma i-Hulu Live. Abahlinzeki bezinsizakalo abanjengo-YouTube TV ne-Hulu Live bebelokhu benikela ngezinsizakalo eziphezulu kubasebenzisi bayo ngamanani aphansi.
I-YouTube TV ingcono kakhulu kulabo babukeli abafuna iziteshi eziningi ngentengo engcono, kanti iHulu Live ingahle ifanele labo abanentshisekelo yokuhlanganisa izinsiza zabo zokusakaza bukhoma ze-TV kanye nezinsizakalo zokusakaza ezifunwayo.
Uma unentshisekelo enkulu ezindabeni noma kokuqukethwe kwasekuqaleni kukaHulu, mhlawumbe kuwe Hulu Live kungaba ngcono kancane, kodwa kumuntu othanda ezemidlalo, i-YouTube TV nakanjani iyoba ehamba phambili. Uma ungaqiniseki futhi unanoma iluphi uhlobo lokungabaza ngazo zombili izinsizakalo futhi ungakwazi ukukhetha eyodwa, mane usebenzise izivivinyo zamahhala zomhlinzeki ngamunye wesevisi bese uzibonela!
U Amasayithi Womculo avinjiwe - Lalela Umculo Nomaphi
Yini Ongayibuka kuDisney Plus?
Izinombolo ze-iPhone 11 Pro Max Model (A2161, A2218, A2220)
Yini okufanele uyibuke ku-Hulu? Iqoqo Lokugcina (2020)
sisekhona lapha putlocker
awukho umdlalo akukho kuphila kwesikhumba se-minecraft
mahhala $ 500 amazon ikhadi lesipho
amawebhusayithi wama-movie wamahhala ngaphandle kokulanda
Ngibhalisela kanjani ku-netflix